आहा ! रारा गोल्डकपको उपाधि संकटालाई (भिडियोसहित) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. आहा ! रारा गोल्डकपको उपाधि संकटालाई (भिडियोसहित) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
‘आहा रारा गोल्डकप’ फुटवल प्रतियोगिताको उपाधि संकटा क्लबले जितेको छ । शनिबार पोखरा रंगशालामा भएको फाइनल खेलको पेनाल्टीमा ४–२ गोल अन्तरले अफ्रिकन रुट्स एशोसियसन क्यामरुनलाई पराजित गर्दै संकटाले उपाधि जितेको हो ।
खेलको ११ औँ मिनेटमा अफ्रिकन रुट्सका बासेकले पहिलो गोल गरेका थिए । खेलको दोस्रो हाफमा संकटाले बराबरी गोल फर्काएको थियो ।
५१ औँ मिनेटमा संकटाका ग्लोरीले बराबरी फर्काएका थिए । खेलको निर्धारित समय र थप गरिएको ९० मिनेटको समय १–१ गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो ।
पेनाल्टीमा संकटाले गोलको बाजी मार्न सफल भयो । पेनाल्टीमा संकटाका अमित तामाङ, सुवास गुरुङ,निरज बस्नेत, आयुष घलानले गोल गरेका थिए ।
दोस्रो सेमिफाइनलमा अफ्रिकन रुट्सले नेपाल पुलिस क्लबलाई २–० ले हराउँदै फाइनल प्रबेश गरेपछि संकटासँग खेल्ने मौका जुरेको थियो । प्रतियोगितामा यसअघि पाँच संस्करण खेलिसकेको संकटा पहिलोपटक फाइनल प्रवेश गरेको थियो ।
संकटाले पहिलो सेमिफाइनलमा एपीएफलाई २–० ले हराएर फाइनल पुगेको थियो । प्रतियोगितामा स्वदेशी र विदेशी गरी कुल ८ टिमको सहभागिता रहेको थियो । फाइनल जितेको टोलीले नगद १० लाख १ हजार र उपविजेताले नगद ५ लाख १ हजार रूपैयाँ पुरस्कार पाएको छ ।
यस्तै अफ्रिकन रुट्सका राफायल रिम उत्कृष्ट मिडफिल्डर हुँदा अफ्रिकन रुट्सकै बासिकले उत्कृष्ट स्ट्राइकर र उत्कृष्ट प्रशिक्षकको उपाधि पनि अफ्रिकन रुट्सका सेर्गी बोरिसले हात पारेका छन् । उनीहरुले जनही २५ हजार रुपैयाँ हात पारेका हुन ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको April 10, 2021 April 10, 2021 132 Viewed